”म आईसीसीको निलम्बन फुकुवाको मिति कुरिरहेको थिएँ” – पारस ! – Massive Khabar
Online News Portal of Nepal
Homeखेलकुद”म आईसीसीको निलम्बन फुकुवाको मिति कुरिरहेको थिएँ” – पारस !
”म आईसीसीको निलम्बन फुकुवाको मिति कुरिरहेको थिएँ” – पारस !
आज मैले कप्तानी त्याग गरेँ । तर, यो अनायास लिएको निर्णय होइन । म कप्तान भएको भएर नेपाली क्रिकेट यहाँसम्म आइपुगेको पनि होइन र मैले कप्तानको भूमिका छाड्दैमा नेपाली क्रिकेट फेरि पछि धकेलिने पनि होइन । मैले राजीनामाको बारेमा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेँ । के गर्दा ठीक हुन्छ, के गर्दा बेठिक हुन्छ भनेर राय लिएँ । त्यसपछि निर्णयमा पुगेको हुँ ।
हिजै मात्र नेपाली क्रिकेटको लागि एउटा सकारात्मक समाचार आयो । आईसीसीले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्‍यो । म यही निर्णयको प्रतिक्षामा बसिरहेको थिएँ । अर्कोतर्फ, क्यानमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । त्यसैले यो (पदत्याग गर्ने) सही समय हो भन्ने लाग्यो । सही निर्णय लिएँ भन्छु ।
हाम्रो ध्यान भनेको को कप्तान बन्यो, को अध्यक्ष बन्यो ? कसले कति रन हान्यो ? कसले जित्यो भन्नेमा हुन्छ । नेपाली क्रिकेट समग्रमा अगाडि बढ्ने हो भने हामी व्यक्तिभन्दा बाहिर निस्किनु पर्ने बेला आएको छ । पदाधिकारी जो पनि होस्, कप्तान जो पनि होस् अथवा खेलाडी जो होस् सबैको सोच भनेको नेपाली क्रिकेट अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने हुनु पर्‍यो । त्यो हुने हो भने हामी अवश्य अहिलेको भन्दा पनि राम्रो नतिजा निकाल्न सक्छौं ।
आफुले गरेको कप्तानीमा म निकै सन्तुष्ट छु । विशेषगरी प्रशिक्षक र खेलाडीको साथ महत्वपूर्ण रह्यो । मेरो लागि सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै खेलाडी र प्रशिक्षकहरु हुनुहुन्थ्यो । रोय डायस, पुबुदु दासानायकेदेखि उमेश पटवालसम्म । त्यस्तै, जगत टमाटा लगायत सबैले मलाई उतिकै साथ र सहयोग गर्नुभयो ।
मेरो त सपना पनि थिएन नेपालको लागि क्रिकेट खेल्ने । तर भाग्यमा अर्कै लेखेको रहेछ । उमेर समूह खेल्दै गएपछि राष्ट्रिय टिमसम्म पुग्दा राम्रो गर्दै गएँ । २००४ मा नेपाली सिनियर टिममा डेब्यु गरेको हुँ । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्मको यात्रालाई पछाडि फर्किएर हेर्दा आफैं अचम्भित हुन्छु । मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो घरेलु संरचनालाई बलियो बनाउने हो भने आगामी दिनमा टेष्ट मान्यताप्राप्त राष्ट्र बन्न सक्छौं । त्यसको लागि सबै अहिलेदेखि नै लाग्नु पर्छ ।
(श्रोत : सिम्पल अनलाइन)
चीनको नेपालमा गिद्धे नजर : क्लिप र विषादी प्रयोग गरेर नेपालमा रुद्राक्षका दुर्लभ मुख तयार !
रंगशालामा डोजर चलाउने प्रकाश कडेंल प्रहरीबाट छुटेपछि पहिलो पटक मिडियामा, सके कारवाही गरेर देखाउन धुर्मुस–सुन्तलीलाई चेतावनी ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
चाडपर्वका बेला जनतालाई दुःख दिने चोर, गुन्डागर्दी, दलाललाइ नियन्त्रण गर्न प्रहरीले चल्यो यस्तो कदम !
यि हुन् पूर्वका चर्चित ७ शक्तिपीठहरु , सेयर गर्नुहाेस् पुरा हुनेछ मनाेकामना
फेवातालमा डुङ्गा पल्टिँदा काठमाडौंका रामशरण बेपत्ता
एमसिसीमा रहेका १० प्रावधान मान्न सकिँदैन- झलनाथ खनाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जन्मदिन’ मनाउँदा हेलिकोप्टर र खाना खर्च मात्र ८२ लाख
© 2020 Massive Khabar | WordPress Theme by Superb WordPress Themes